राती कस्ता खाना खानु हुदैन ? कस्ता काम गर्नु हुदैन ? जान्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
खानेकुराको बारेमा सरल जानकारी छ, त्यो हो – सकभर सुर्यास्त भए पछि खानु हुदैन । तर आधुनिक समाजमा सुर्यास्त नहुदै खाना खानु असम्भव प्राय: हुन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने सुर्यास्त नभइ घरका सबै सदस्य घरमा आइपुगिसकेका पनि हुदैनन् ।
यसैले सुर्यास्त नभइ खाना खानु हुदैन भन्ने कुरालाई थोरै परिमार्जित गर्नु आवश्यक छ । अब भन्नु पर्छ, सुत्नु भन्दा कम्तिमा ३ घण्टा अगाडी बेलुकाको खाना खाइसक्दा राम्रो । पक्कै पनि धेरैले यो कुरा भने दैनिक जीवनमा लागू गर्न सक्छन् ।
यसका अतिरिक्त राती केहि खानेकुराहरु बर्जित गर्ने हो भने पनि स्वास्थ्यमा पुग्ने हानी कम गर्न सकिन्छ । यहाँ हामीले त्यस्तै केहि खानेकुराहरुको सूचि तयार पारेका छौँ जसलाई तपाईले राती नखानु भए स्वास्थ्य बिग्रिन पाउँदैन ।
सुतेको बेला मानिसको पाचन प्रक्रिया ढिलो सञ्चालनमा आउँछ । मसलायुक्त खाना पचाउन बढी समय लाग्छ । यस्तो खाना खाइयो भने गहिरो निद्रा लाग्दैन ।
यसले शरीरको तापक्रमसमेत घटाउने भएकाले मिठो निद्राका लागि यो राम्रो मानिँदैन । यस्तो खाना खाएर सुत्दा ऐँठन हुने सम्भावनासमेत भएको मन्ट्रियल विश्वविद्यालयले गरेको एउटा अनुसन्धानले देखाएको छ ।
फलफूल र तरकारी स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो । यसले शरीरमा रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउने गर्छ । तर, कुनै–कुनै फलफूल र तरकारी यस्ता हुन्छन्, जसलाई सुत्नुअघि खायो भने निद्रा पर्दैन ।
काउली, ब्रोकाउली लगायत तरकारीमा पाइने तत्वले दिमागमा उत्पन्न हुने ट्राइप्टोपान नामक एमिनो एसिडको प्रभावलाई कमजोर बनाइदिन्छ ।
ट्राइप्टोपान मिठो निद्रा लगाउन आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै, बन्दाकोबी, कोसे तरकारी, सेतो च्याउ, गोलभेँडालगायत तरकारी पनि सुत्नुअघि खानु हुँदैन ।
सुत्नुअघि मिठाई, केक, चकलेट, कुकिज अथवा आइसक्रिम खाने बानी कसैकसैमा हुन्छ । यसले मनलाई आनन्द त देला, तर मिठो निद्रा दिँदैन ।
यस्ता खाद्य पदार्थमा चिनीको मात्रा उच्च हुन्छ, जसलाई राती सुत्ने बेला नियमित खानाले निद्रा पर्दैन ।
खाना बनाउन अल्छी मानेर राती जंक फुड खाएर सुत्नेको संख्या बढिरहेको छ । क्यान्डी बार, पोट्याटो चिप्स, चाउचाउलगायत फास्ट फुडलाई डिनरका रूपमा खानेको संख्या बढ्दो छ ।
चकलेटमा क्याफिन हुन्छ । कालो खालको चकलेटमा क्याफिनको मात्रा अझ बढी हुन्छ । क्याफिनजन्य चिज खानाले मानिस थकानरहित हुन्छ र शरीरमा पाचनसम्बन्धी रासायनक्रिया तीव्र बन्छ ।
साथै, यसले शरीरलाई डिहाइड्रेट गराउँछ । सुत्नुअघि मानिसको शरीरमा यस्ता परिवर्तन आउनु ठीक मानिँदैन ।
बदाम, दूध, चिज आदिमा प्रोटिनको मात्रा सन्तुलित मात्रामा पाइन्छ, जसले मिठो निद्रा लगाउँछ । रातो मासुमा प्रोटिन उच्च मात्रामा पाइन्छ ।
यसले अनिद्राको समस्या उत्पन्न गराउँछ । साथै, प्रोटिनमा पाइने एमिनो एसिडले दिमागलाई चनाखो राख्छ र निद्रा पर्न दिँदैन ।
राती दही खानु हुदैन
स्वास्थ्य तथा शास्त्रका अनुसार राती गर्न नहुने कुराहरु
शास्त्र भन्छ दिनभरी हुने सुख शान्तिको सम्बन्ध रातसँग हुन्छ । रातीमा राम्रो निद्रा परेन भने शरीरको थकान मेटिँदैन । तपाइँलाई ताजा अनुभव रातभरीको विश्राम पछि मात्र हुन्छ ।
सुत्नुअघि केही कुरामा विचार गरिएन भने अस्वस्थता र रोगको भारी बोकेर समस्यामा पर्न सकिने हुन्छ । सुत्नु अगाडि गर्न नहुने यस्ता केही काम छन् ती कामले तनाव तथा स्वास्थ्य समस्या निम्त्यान सक्छ ।
१. सुत्नु अगाडि खाना
राती सुत्नु भन्दा अगाडि तपाई यदी हात खुट्टा र अनुहार चिसो पानीले धुनुहुन्छ भने यो बानी बदल्नु राम्रो हुन्छ । सुत्नुभन्दा पहिले चिसो पानीले नभई मनतातो पानीले हातमुख धुँदा यसले मांशपेशीको तनाव कम गर्छ र मिठो निन्द्रा लाग्छ ।
Don't Miss it नुहाउनु अघि कपालमा किन तेल लगाउनुपर्छ ? जानी राखौ कपालमा तेल लगाउँदाको फाइदा
Up Next यो वर्ष आफ्नो घरमा गर्नुहोस् यी ५ परिवर्तन, वर्षभरि नै हुनेछ लक्ष्मीको बास – पढेर शेयर गर्नुहोला